Kismaayo News » Dowladda oo heshiis la gashay shirkad sheeybaaro ka hergalin doonta dalka‏
Dowladda oo heshiis la gashay shirkad sheeybaaro ka hergalin doonta dalka‏
Kn: Dowladda Soomaaliya ayaa heshiis wadashayn ah la gashay shirkad sheeybaaro ka hergalin doonta dalka
Shirkad laga leeyahay dalka Kenya ayaa biloowdey mashruuc ay ku maalgalineyso sheeybaaro waaweyn oo laga hergalinayo Soomaaliya si loo baaro tayada cuntooyinka Soomaaliya taga ama ka yimaada ee Kenya soo gala iyo waliba badeecooyinka kale.
Shirkadani oo lagu magacaabo Polucan ayaa wadashayn la leh dowladda Soomaaliya, waxana ay sheeybaarkii ugu horeeyey geyn rabtaa Soomaaliya sanadka soo socda, iyadoo balse hawsha baarista cuntooyinka Soomaaliya ka yimaada kasii wadaysa Kenya.
Arrintani oo ah mid muhiimadeedu badantahay, gaar ahaan Soomaaliya oo muddo labaatan sanno ka badan dalka la keeni jirey badeeco dhacday, mid haloowdey, mid tayadeedu liidato iyo mid sumeysan ayaa waxa ay suurogaltahay in ay albaabada u furto dabogal iyo kormeer lagu sameeyo quutul daruuriga.
Waa mid la xiriirta caafimaadka dadweynaha, fayadhoowrka guud , waxna ka qaban karta waliba sumcada wax soo saarka Soomaaliya ee suuqyada kale ee bariga Afrika, iyadoo damaanad loo helayo in badeecada Soomaaliya ka tagta ay noqoto mid cuduro nadiif ka ah.
Dominic Mureith waa agaasimaha shirkadani, isagoo la hadlayay wargeyska Businnes Daily ee Kenya kasoo baxa, ayuu sheegey in ifafaalooyin wanaagsan ay kala kulmeen Soomaaliya mudadii bilaha ahayd ee ay halkaasi joogeen, islamarkaasina adeegyo u qabteen shirkado dhow ah oo Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa si isa soo taraysa heshiisyo ola galaysa shirkado kala duwan oo bixiya adeegyo aad loogu baahanyahay, gaar ahaan kuwa taqasusyada gaarka ah, kuwaasoo aanan laga helin Soomaaliya.